Badweyntimes.com » XOG: Xildhibaano Mooshin ka keenay halka lagu qabanayo Doorashada M/weynaha Somalia..Badweyntimes.com
XOG: Xildhibaano Mooshin ka keenay halka lagu qabanayo Doorashada M/weynaha Somalia..
Kadib markii ay Guddiga Doorashada Madaxweyne Go’aan ku gaareen in doorashada lagu qabto Gudaha xirada AFISIYOONI oo ah meel aad ugu dhaw xalane ayaa Go’aankaasi waxaa uu abuuray qilaaf Cusub.
Go’aanka ayaa yimid markii ay cabasho ma timid inta badan musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha dalka Soomaaliya kuwaas oo sheegay in aynan kalsooni ku qabin goobti hore )oo horey loogu qorsheyay ee eheed xarunta tababarka booliska ee janaraal kaahiye (Iskool Boolisiyo).
Arinta ayaa timid markii uu taliyaha booliska Soomaaliya ka sheegay in ay booliska taageersan yihiim madaxweyne Xasan Shiikha aynan u codeeyn donaan shaqsiyaad ka mid ah booliska oo soo noqday xildhibaano hadalkaan ayuu ka yiri Munasabad lagu xusayay malintii la aas aasay booliiska oo eheed 20 December.
iyadoo Xaalada halkaasi mareyso ayaa Xalay waxaa soo if baxday in xildhibaano tageersan Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in ay mooshin ka keeneen arintaas oo lid ku ah qorshaha ay madaxtooyo watay bilihii lasoo dhaafay.
xildhibaano nala hadlay ayaa sheegay in mooshinkan uusan soconeyn maadama go’aamo badan ay ansixiyeen oo aan barlamaan la geynin oo ay ka mid tahay lacagta musharaxinta,khudboiyinka,iclaaminta Maalinta doorashada iyo dhamaan jadwalada doorashada ku socday oo so bilawday 27 Janaayo.
SAWIRO: Safiirka Cusub ee UK u qaabilsan Somalia oo Amaanay Wadaniyiin Soomaali ah oo ku dhiiraday….
WAR CUSUB: Qaar kamid ah isgoysyada Muqdisho oo lagu Xeray Kaamiradaha ilaalada Amaanka…